Feesbuukii Fayyadamuudhaan Qabxiilee ijoo Daldala keessan milkeessuuf Oolan. | oroict.com
Feesbuukii Fayyadamuudhaan Qabxiilee ijoo Daldala keessan milkeessuuf Oolan. | oroict.com oroict.com
Post in Leenjii fi Gorsa TQO, Marsaalee Ammee, Odeeffannoo Daldalaa
Yeroo ammaa Feesbuukiin dhaabbata guddaa Sadarkaa Idil-Addunyaatti dursaa jiru yommuu tahu hojiilee keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Kana jechuun Tekinoolojiin Feesbuukii daldala ammayyaatiif bu’aalee addaa heddu qabatee dhufeera. Hojii keenya(Daldala) keenya keessatti galii keenya guddisuufi fayyadamaa tahuuf carraalee tekinoolojiin Feesbuukii nuuf fidee dhufe beekuun dirqama taha.
Carraaleen kun maalfa’a? akkamittimmoo itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu baldhinaan kasuuf yaalla, nu duuka bu’aa…
Daldala keenya irraa bu’aa akka argannuufi hojii daldala keenyaa akka babbaldhifannuuf Carraaleen gurguddoon Feesbuukiin fidee dhufe muraasni:
1) Istraateejii Daldala gatii gadi-bu’aa(Low cost strategy)
Dirree daldalaa keessatti tajaajilootni Marsaalee biroo irratti baasii Doolara kumaatamaan lakkaawamutti tilmaaman hardha garuu feesbuukii irrattimmoo fallaa kanaa tahee muldhata. Walumaagalatti Dhaabbileen gurguddoofi xixiqqoonillee ganda ija walqixaatiin itti ilaalaman tahaa dhufeera.
2) ibsa Odeeffannoo daldala ykn hojii keenyaa Ummata hedduuf qooduuf tajaajila.
Kunis Ibsa tajaajiloota ykn Oomishaalee keenyaa haala salphaan beeksifachuuf nu gargaara. Akkasumas Ibsa tajaajiloota ykn Oomishaalee keenyaa bifa suuraafi Suur-Sagaleetiin beeksisuudhaan namootni hubatanii akka fayyadaman carraa bana.
3) Babaldhina Dirree Daldalaatiif – Maamiloota keenyaan wal-qunnamuuf carraa kan nuuf banu waan taheef, waliin haasawuufi ibsa barbaachisaa gochuu bira darbee dirree daldalaa keenya kan babaldhisuudha. Kun Naannoo dhaan kan hin daangofneef maamiltoota Idil-Addunyaa horachuufi tajaajiloota ykn oomishaalee keenya gurgurachuuf ykn raabsuuf haala mijataa kan uumeedha.
4) Maamiltoota keenya deeggaruuf – Maamiltoota keenyaan kan nu walqunnamsiisu waan taheef tajaajilootaafi Oomishaalee keenya irratti ibsa barbaachisaas tahee haala itti fayyadamaa irratti ,maamiltoota keenyasf deeggarsa barbaachisaa gochuuf carraa kan baneedha.
5) Marsariitii keenya Maamiltootni hedduun akka daawwatan affeerraa keessatti gahee guddaa taphata.
Maxxansaaleefi Beeksisa keenya Feesbuukiirratti maxxansinu keessatti hidhaa(link) gara Marsariitii geessu dabaluudhaan maamiltootni tajaajila ykn Oomisha keenya barbaadan akka daawwatan affeeruu dandeenya waan taheef maamiltoota keenya gara marsariitii keenyatti affeeruuf gahee olaanaa qaba.
6) Beeksisa Teessuma Laffaatti Xiyyeeffate – beeksisa keenya keessatti Biyya tokko, Biyyoota muraasa ykn Naannoo Muraasa, akkasumas Addnuyaa guutuu irratti xiyyeeffannoo gochuun beeksisa hojjachuun ni dandeenya, Kunis Beeksisichi Naannoo irratti xiyyeeffanne qofatti akka muldhatu taasisa.
Akkasumas Iddoo tajaajilli ykn Oomishni keenya itti argamu agarsiisuuf – iddoo argama keenyaa odeeffannoo guutuu maxxansa keenya wajjiin maxxansuu waan dandeenyuuf maamilootni keenya haala salphaan iddoo argama keenyaa adda baafachuudhaan nu argachuu akka danda’an taasisa.
Daldalaa fi Facebook, Social Media and Business